मोहम्मद डे किन मनाइन्छ ? « Image Khabar
मोहम्मद डे किन मनाइन्छ ?
काठमाडौं । विश्वभर इस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मोहम्मदको १४९५ औं जन्मोत्सव नेपालमा पनि मनाइँदैछ । ‘मोहम्मद डे’ पनि भनिने यस दिन मुस्लिम समुदायले र्‍याली निकाल्ने, मस्जिदहरुमा कुरान पाठ गर्ने, उनका उपदेश स्मरण गर्ने, सामूहिक भोज खाने र एकअर्कामा शुभकामना साटासाट गर्ने चलन छ ।
मोहम्मद डे लाई ईद मिलादुननबी र १२ रबिउल अब्बल पनि भन्ने गरिन्छ । आमरुपमा हामी नेपाली मुस्लिम समुदायले मोहम्मद जयन्ती भनेर मनाउने गर्दछौँ । १४९१ वर्ष पहिले अरब देशको मक्का शहरमा बनु हाशिम खानदानमा हजरत अब्दुल मुत्तलिबको घरमा बुवा हजरत अब्दुल्लाह र आमा हजरत अमिना रदिउल्लाह ताला अन्हुमाको कोखबाट २२ अप्रिल ५७१ ई।वि मा हजरत मोहम्मद सलल्लाहु अलैहे वसल्लमको जन्म भएको हो ।
अरेबिक महिनाको रबिउल अब्बलको १२ तारिख सोमवारका दिन विहान सूर्य उदाउनु पूर्व हजरत मोहम्मद सलल्लाहु अलैहे वसल्लमको जन्म भएको हो । मोहम्मदको जन्म दिनलाई संसारभरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले मोहम्मद–डे मनाउने गर्दछन् ।
मोहम्मद–डे का अवसरमा आफ्नो परम्परा वमोजिम गरिब, असक्त अनाथ बालबालिकाहरुलाई दान दिने, घर–आगँन सरसफाई गर्ने, घरमा इस्लामीक झण्डा फहराउने, दिप–प्रज्वलन गर्ने, मोहम्मदको यादमा मिलादुन नबीको आयोजना गर्ने र मोहम्मदको गुणगान गर्दै जुलुस निकाली मोहम्मद जयन्ति मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ ।
हजरत मोहम्मद सलल्लाहु अलैहे वसल्लम अल्लाह (ईश्वर) को दुतको रुपमा जगतमा आएको इतिहास बताउँछ । मोहम्मदको मिठो बोली, सुद्ध तथा नैतिक आचरण तथा व्यवहारबाट अरबका जनताहरु प्रभावित भएका थिए । ४० वर्षसम्म उहाँले अरबमा रही इस्लाम धर्मका धार्मिक मान्यताबारे जनताहरुलाई प्रशिक्षित गर्नु भएको थियो ।
एकदिन मोहम्मद सलल्लाहु अलैहे वसल्लमले अरबको अग्लो पहाडबाट के तपाईहरु अल्लाहको अलवा यो संसारमा कोही छैन् भनेर मान्नुहुन्छ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो जवाफमा अरबीक जनताहरुले हामी मान्न तयार छौँ भनी जवाफ फर्काएका थिए र यो नै पहिलो इस्लाम धर्मको मौखीक प्रचारप्रसार भएको इतिहासमा उल्लेख छ ।
मस्जिदमोहम्मद डेहजरत मोहम्मद